साल्मेचाकल, ताल्ढुंगा/बैशाखको अन्तिम साता जिल्लामा रहेको सरकारी टोली खानिखोला गाउँपालिकाको केन्द्रमा पुग्यो । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाको नेतृत्वमा गएको टोलीले नागरिकता लगायतको शिविर संचालन गरेर तीन दिन पछि फर्कियो ।
शिविर सकिएकै भोलिपल्ट जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख उद्धव केसीको संयोजकत्वको टोली खोनिखोला पुग्यो । मन्त्रालयको सहयोगमा पाँच दिने योजना, अधिकार र कानुनका विषयमा तालिम दिन समन्वय अधिकारीको टोली पाँच दिन खानिखोलामा बस्यो । त्यहि समयमा भुकम्प पछिको पुननिर्माणका लागि डकर्मीहरुको तालिम संचालन भईरहेको थियो । अन्य केहि संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरु पनि खानिखोला गाउँपालिकाको केन्द्रमा बसिरहेका थिए । जनप्रतिनिधिहरु, कर्मचारीहरु, जिल्लाबाट गएको टोली, अन्य पाहुनाहरुलाई थाम्न साल्मेचाकलको बजारलाई हम्मेहम्मे प¥यो । नागरिकलाई सेवा दिन गएको टोलीले अधिकतम प्रयास ग¥यो तर भौगोलिक विकटताका कारण नागरिकहरुले भोग्नु परेको सास्तिलाई मौन स्विकृति दिएर फर्कियो । नागरिकताको सिफारिसका लागि वडाअध्यक्ष र सचिवहरुले नियत नै राखेर ५ सयसम्म शुल्क लिएको पुष्टि भयो । तत्काल प्रहरी मार्फत टोलीले उक्त रकम फिर्ता गराउन सफल भयो । सदरमुकामसम्म नागरिकता बनाउन आउँदा ५ हजार भन्दा धेरै खर्च हुने अवस्थामा जाबो ५ सय बुझाउन के गाह्रो ? स्थानीयले जनप्रतिनिधिलाई ढाडस दिदै अतिरिक्त रकम लिन उक्साएको पनि देखियो ।
निर्वाचन भएको एक वर्ष भईसक्यो । गाउँपालिकाको आफ्नो भवन छैन । कार्यालय राख्ने स्थान छैन । वर्ष दिनमा पनि जग्गाको ब्यवस्थापन हुन सकेको छैन । प्रस्तावित ७ रोपनी जमिन खरिदको प्रकृया शुरु भए पनि टुङ्गो लागिसकेको छैन । ब्यक्तिगत स्वार्थका कारण स्थानीयहरुको विरोध र समर्थन दुबै छ । मौषमले मिनेट मिनेटको परिवर्तन देखाईरहेको छ । कर्मचारीहरुको ब्यवस्थापन अझै सकस छ । अध्यक्ष र उपाध्यक्ष बस्ने सडकले निर्माण गरेको भवनको एउटै कोठा छ । त्यहि तल्लाको अर्काे कोठामा वडा नम्वर ५ को कार्यालय छ । माख्लो तल्लामा प्रहरीको आबास, कार्यालय, हिरासत, किचेन जे जे भने पनि दुईवटा कोठा छ । प्रमुख प्रशाशकिय अधिकृत र अन्य कर्मचारीहरुका लागि एउटा कोठा राखिएको छ । कार्यालयमा हुने बैठक, गोष्ठी र तालिम त्यहि भवनको बरण्डामा छ । बरण्डामा कार्यक्रम भएपछि प्रहरीहरु सबै बाहिर निस्किदिनु पर्छ । हिरासतमा राखेको ब्यक्ति भयो भने उसैलाई लिएर हिड्दा चुनौती बाहेक केहि छैन । कार्यालय संचालनमा भएको अफ्ठायारा त कति हुनु कति ? पाहुनाहरु जाँदा बास बस्ने राम्रा होटलसहरु समेत बन्न सकेको अवस्था छैन । एकै पटक धेरै मान्छेहरुको आगमन हुँदा राख्न सकिने अवस्था छैन ।
केहि नीजि आवासहरु, स्वास्थ्य चौकीको भवन आवासका लागि प्रयोग हुँदै आएका छन् । ललितपुरबाट जोडिएको मोटरबाटोले केहि सहज भएको छ । ग्याँसको सिलिण्डर दुई हजारमा पुग्छ । चामल देखि तरकारीसम्म ललितपुरको चापाँगाउबाट जाने गरेको छ । नागरिकले गत वर्षबाट सभासद् रामहरी सुवेदीको विशेष पहल पछि बस देख्ने अवसर प्राप्त गरेका छन् । दैनिक एउटा बस ताल्ढुङ्गाबाट काठमाडौसम्म आईपुग्छ । सडक सञ्जाल जिल्लाबाटै जोडिन सकेको छैन । खोपासी ताल्ढुङ्गा सडक क्रोक्रे भिरबाट अघि बढ्न सकेको छैन । जिल्ला सदरमुकाबाट भिन्नै संसार जस्तो लाग्ने खानिखोला गाउँपालिका केन्द्रको अगाडी निर्माणाधीन विद्यालयको अवस्था झनै दयनिय छ । खानेपानी, शौचालय, वातावरण, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य आधारभुत आवश्यकताका विषयमा समेत नागरिकहरुले खुलेर सेवा प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन । न त सेवा दिनेले खुलेर सेवा दिन सकिरहेका छैनन । विकट क्षेत्रको नागरिक हुनुमा पीडा त कति हो कति ? त्यसको सेवा दिन अधिकारप्राप्त निकायलाई अख्तियारमा उजुरी गरिएको छ । ‘काम शुरु गर्नै हुँदैन, अख्तियारमा उजुरीको चाङ्ग लाग्छ’–अध्यक्ष कृष्ण खुलालले भने–‘नागरिकले अनुभुत हुने गरी परिवर्तनको आभाष दिलाउने छौं ।’ प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद अधिकारीले नागरिकहरुलाई सेवा दिन जस्तो सुकै सकंटमा पनि कृयाशिल भएको बताए ।
९५ लाख ५९ हजार बेरुजु
साविकका गाउँ विकास समितिहरु हुँदा जनप्रतिनिधि विहिन अवस्थामा खानिखोला गाउँपालिकाको ९५ लाख ५९ हजार बेरुजु देखिएको छ । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले गरेको लेखापरिक्षणमा प्रकृयाबाट १० लाख ६२ हजार फछ्र्याैट भई बाँकी ८४ लाख ९७ हजार बेरुजु मध्ये १ लाख २ हजार असुल गर्नु पर्ने, २७ लाख ३१ हजार नियमित गर्नु पर्ने र ५६ लाख ६४ हजार पेश्की बाँकी रहेको उल्लेख गरेको छ ।
साविकको फलामेटार गाविसमा अलैची खेतीको शीप विकास तालिममा खर्च भएको ५० हजार, बहु विहानी किसान कृषि सहकारी संस्थालाई फलफलुको विरुवा वितरण गरेको ५० हजारको भपाई फेला परेको छैन । १७ जना ब्यक्तिलाई दिएको ५ लाख ४२ हजार ५ सय १९ पेश्की फछ्र्याैट हुन सकेको छैन । साल्धारा गाविसको चारवटा संस्थालाई उपलब्ध गराएको फर्निचर बापतको १ लाख ९७ हजार २ सय ९३ रुपैयाको विल भरपाई नै छैन । २२ जना ब्यक्तिले लिएको पेश्की ५ लाख ३ हजार १ सय २८ रुपैयाको फछ्र्याैट हुन सकेको छैन ।
डाँडागाउँ गाविसमा २७ ब्यक्ति र एक संस्थालाई दिएको १९ लाख ८५ हजार १ सय ५२ रुपैया रकम पेश्की छ । आरन निर्माणमा अनुदान, तालिममा सहभागिहरुको खाजा र हाजिरीमा विल भरपाई नमिलेको लेखापरिक्षणमा उल्लेख छ । साल्मेचाकल गाउँविकास समितिमा २२ जना ब्यक्ति र ५ जना संस्थालाई दिएको ११ लाख ८३ हजार पेश्की फछ्र्याैट गर्न निर्देशन दिएको छ । मोटरसाईकल किन्दा फरक फरक मुल्य भएको, गाडी भाडा बापत भएको खर्च रकम लेखाको नियम विपरित खर्च भएको लेखाको टिप्पणी छ । कार्यालय मर्मतका लागि गरिएको खर्चको शिर्षक फरक परेको, दक्ष जनशक्ति नहुँदै ८ लाख ३९ हजार ४ सय ६९ रुपैयाको सामाग्री खरिद गरेको भन्दै छानविन गर्नु पर्ने बताएको छ । जनशक्ति नहुँदा उक्त सामाग्रीको दुरुपयोग हुने अवस्था देखिएको छ । १४ लाख २६ हजार २ सय ८ को फर्निचर खरिद, ३ लाख गाडी भाडामा भएको खर्चको ब्यवस्थापन गर्न लेखापरिक्षणको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।